အများဆုံးအမြတ်အစွန်းအတွက် Margin ကုန်သွယ်မှု။ 🥇 အကောင်းဆုံးပွဲစားကိုရှာပါ။ ဇွန်လ 2022
မာဂျင်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်သွယ်မှု ၂ ဝဝ ၂ လမ်းညွှန်ကိုသင်ယူပါ
မာဂျင်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုသြဇာသက်ရောက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏အကောင့်၌ရှိသည့်ငွေထက်ပိုပြီးကုန်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်။
margin အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်းသင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍၊ ကုန်သွယ်မှုကျဆင်းခြင်းမတိုင်မှီတွင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Margin Trading နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှု2ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ 2021 လမ်းညွှန်တွင်သင်သိထားသင့်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုအကောင်းနှင့်အထွက်များကိုသာဖုံးကွယ်ထားရုံသာမကယနေ့တွင်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးသြဇာပွဲစားများအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးကြသည်။
မှတ်စု: သင်၏ တိုးမြင့်လာသော ကုန်သွယ်မှုသည် သင့် margin အကောင့်တွင် ရှိသည်ထက်ပို၍ သင့်အား ဆန့်ကျင်ပါက၊ ကုန်သွယ်မှုကို ပွဲစားမှ ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အနားသတ်တစ်ခုလုံး ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Margin Trading ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင်ကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်သည့်လုပ်ငန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် Forex၊ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ cryptocurrencies သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါစေ - သင်ရွေးချယ်သောမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုမဆိုပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏အကောင့်၌ရှိသည့်ငွေထက်များသောအားဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာသင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကရန်ပုံငွေတွေကိုချေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။
၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင်သင်အသုံးပြုလိုသောသြဇာပမာဏကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်မင်းမှာအကောင့်လက်ကျန်ငွေဒေါ်လာ ၅၀၀ ရှိပြီး ၁၀ လက်ဆပ်ကိုသုံးတယ်။ သီအိုရီအရဆိုလျှင်သင်သည်အမှန်တကယ်ရှယ်ယာဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နှင့်သင်အမှန်တကယ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကုန်သွယ်မှုတွင် ၅% လုပ်ပါကသင်၏အမြတ်အစွန်းသည် ၂၅ ဒေါ်လာမှ ၂၅၀ အထိတိုးလာလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထက်ပါကုန်သွယ်မှုသည်တန်ဖိုး ၂% ကျသွားပါကသင်၏ဆုံးရှုံးမှုကို ၁၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၁၀၀ အထိတိုးလိမ့်မည်။ သင်အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်သြဇာမည်မျှပင်ရှိပါစေသင်သည် 'အနားသတ်' ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုကိုမပိတ်မချင်းပွဲစားများကိုင်ထားသည့်လုံခြုံရေးသိုက်တစ်ခုနှင့်တူသည်။
အကယ်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါကကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက်ကျော်။ သင့်ကိုဆန့်ကျင်နေပါကပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကို 'ဖျက်သိမ်း' ခြင်းဟုလူသိများပြီးဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏လုံးလုံးလျားလျားဆုံးရှုံးမှုကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်မို့ကုန်သွယ်မှုနဲ့သြဇာသက်ရောက်ပုံကိုသေချာစွာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာလိုအပ်တဲ့ stop-loss safeguard များမရှိပါကသင်ငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
Margin Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
မာဂျင်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ရှည်သောတိုတောင်းသောအမိန့်များပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်
သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချရန် stop-loss အမိန့်များကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်
Margin Trading သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
margin အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာစရာများစွာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံများကိုတစ်ဆင့်ချင်းဖြိုဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာတူညီသောအရာတစ်ခုတည်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဟူသောသြဇာသက်ရောက်ခြင်းနှင့်အနားသတ်ခြင်းတို့သည်မှားယွင်းသောအယူအဆဖြစ်သည်။ သူတို့အချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်းအနည်းငယ်ခြားနားမှုရှိသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်, သြဇာကိုရည်ညွှန်းနေစဉ် မျိုးစုံ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးတွင်လျှောက်ထားရန်စီစဉ်ထားကြောင်းဆိုသည်မှာ margin သည်ပွဲစားမှသင့်ထံမှလိုအပ်သောကြိုတင်ငွေပေးသွင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သြဇာကိုပုံမှန်အားဖြင့် 'အချိုး' သို့မဟုတ် 'မျိုးစုံ' အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဥပမာ 5x နှင့် 5: 1 သို့မဟုတ် 10x နှင့် 10: 1 တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအနေဖြင့်၊ leverage ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သော်လည်းပွဲစားအချို့သည်အချိုးအစားအဖြစ်ပြသနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်လျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းသြဇာပမာဏသင့်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးရှိမည်မျှအဆုံးအဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားက Apple စတော့တွေကိုကြာရှည်စွာရှာဖွေချင်နေပြီဆိုပါစို့
သင်၏အကောင့်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရှိသော်လည်းသင်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင် 5x ၏သြဇာသက်ဆိုင်ပါသည်
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ Apple ဝယ်ယူမှုမှာဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖြစ်သည်
အထက်ပါဥပမာအရ Apple ၏အစုရှယ်ယာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏လက်ကျန်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြစ်သောကြောင့်အမြတ်အစွန်း ၁၀၀ ရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ သင်က 10x ၏ leverage ကိုကျင့်သုံးသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့ 100 ကိုမြှောက်ရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အမှန်တကယ်အမြတ် $ 1,000 ရရှိခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါဥပမာကိုကြည့်ပြီး Apple မှာဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ၀ ယ်ရန်အမှာစာရှိပါတယ်
သီတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းတွင် Apple ၏အစုရှယ်ယာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်း
သာမာန်အားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၏ ၅% ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သင်သည်သြဂုတ် ၅ ဆကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးသင်၏ဆုံးရှုံးမှုသည်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြစ်သည်
ဒါကြောင့်ယခုအခါသြဇာသည်လက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိပြီဆိုလျှင်သင်၏သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေနှင့်၊ အကျိုးအမြတ်သည်ကုန်သွယ်မှုပြုရန်ပွဲစားကသင့်ထံမှတောင်းဆိုသောရှေ့တန်းလုံခြုံရေးဖြစ်သည်။ Layman ၏စည်းကမ်းချက်များအရ၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲပမာဏသာဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့သင်၌ဒေါ်လာ ၅၀၀ ရှိပြီး ၁၀ ခုကိုသြဇာသက်ရောက်သည်ဆိုပါစို့။ သေချာတာပေါ့၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နှင့်ညီမျှသည်။ သို့သော်သင်၏အရန်သည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်သင်၏အကောင့်တွင်သင်လိုအပ်သောပမာဏဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုကိုမပိတ်မှီတိုင်အောင်၎င်းကိုသင်၏ 'margin account' ထဲသို့ထည့်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်လက်ဆပ်ဖြင့် ၁၀x နှင့်ကုန်သွယ်လိုပါကလိုအပ်သောပမာဏသည် ၁၀% (10/10) ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် 30x leverage ဖြင့်ကုန်သွယ်လိုပါကသင်၏တန်ဖိုးကို ၃.၃၃% ထားရန်လိုအပ်သည် (3.33/1)
မာဂျင်အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်းမှ ဦး ဆောင်။ ကျွန်ုပ်တို့အား“ ဖျက်သိမ်းခြင်း” ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏မြှင့်တင်ထားသောကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏ margin အကောင့်ရှိထက်ပိုပြီးသင့်ကိုဆန့်ကျင်နေပါကဤအရာသည်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သင်ဝယ်ယူမှုတစ်ခုတွင် သြဇာအာဏာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုကြပါစို့ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
100x ၏ leverage multiple တွင် သင်သည် $20 လောင်းကြေးပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည် $2,000 တန်သည်။
သင့်အနားသတ် $100 သည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ 5% ရှိသည်။
သင်၏ GBP/USD ကုန်သွယ်မှုသည် သင့်အား 5% ဖြင့် ဆန့်ကျင်ပါက ပွဲစားမှ ရာထူးကို ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကုန်သွယ်မှုသည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားပြီး သင်၏ $100 margin ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအရကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အား ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဆန့်ကျင်ပါကသင်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
အခြားဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကိုအမှာစာ ၂ ချပ်ထားပါကသင်၏အနိမ့်ဆုံးပမာဏသည် ၅၀% သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမတိုင်မီသင့်အနေဖြင့် ၅၀% သောကြားခံအစုအဝေးကြီးရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၂၀x အရောင်းအဝယ်ထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
သင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် option ရှိသည်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ 'margin ခေါ်ဆိုမှု' အဖြစ်လူသိများသောသင်ရွေးချယ်သောပွဲစားသည်သင်ဖျက်သိမ်းမည့်စျေးနှုန်းသို့ရောက်သောအခါသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဟာ FTSE 100 ကို 25x leverage နဲ့ကုန်သွယ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ margin သည် 4% ဖြစ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကို ၃.၈% ဖြင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုဆိုပါစို့။ သင်၏ margin balance 3.8% အောက်သာရှိသည်။
ပထမရွေးစရာကဘာမှမလုပ်ဘူး။ အကယ်၍ FTSE 100 သည်သင့်ကို ဆက်လက်၍ ၄% အမှတ်အသားထိရောက်သွားပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးပွဲစားသည်သင်၏အနားသတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။
ဒုတိယရွေးစရာကသင်၏သင်၏ margin အကောင့်ထဲသို့ငွေထပ်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုရှူရှိုက်မိသောနေရာနှင့်သင့်ကုန်သွယ်မှုအားဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတားဆီးပေးလိမ့်မည်။
မင်းမူလကဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက်ထည့်ထားတယ်လို့ဆိုပါစို့။
သင်ကုန်သွယ်မှုသည်ဒေါ်လာ ၁၂၅၀၀ တန်ဖိုးရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်သည် ၄% အမှတ်သို့ရောက်နေပြီးဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဒေါ်လာ ၅၀၀ အနားသတ်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုခံနိုင်သည်
ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ margin account ထဲကိုနောက်ထပ် $ 500 ထပ်ထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
သီအိုရီအရဆိုလျှင်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ထပ် ၄% ထပ်မံဝယ်ယူလိုက်ပြီ
ဆိုလိုသည်မှာမူရင်း ၄% ဖျက်သိမ်းမှုစတင်ခဲ့လျှင်ပင်အပိုထပ်ဆောင်း ၄% ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သည်နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုမှာဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကုန်သွယ်မှုသည်သင့်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပွဲစားမှရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါကသင့်အနေဖြင့်ငွေပိုမိုများပြားစွာထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်အားရေတိုကာလအတွင်းဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
မွတ္စု: သင်အမှန်တကယ်အနားသတ် 'ခေါ်ဆိုမှု' ကိုအမှန်တကယ် truest ပုံစံအတွက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်အီးမေးလ် (သို့) မိုဘိုင်းအသိပေးချက်မှတစ်ဆင့်သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
မာဂျင်အရောင်းအ ၀ ယ်
သင်၏ပုံမှန်ကုန်သွယ်ခွန်များအနက်မာဂျင်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ ဒီ၏ရှေ့တန်းမှမှာနေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးတွင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်သြဇာမည်မျှပင်ရှိပါစေညအိပ်ရန်ငွေကြေးကိုသင်အမြဲတမ်းပေးရလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာပွဲစားများကသင့်အားသြဇာဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်အတွက်ရန်ပုံငွေများကိုငှားရမ်းခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးမှာ၊ သင့်အကောင့်ထဲရှိငွေများထက်သင်များများရောင်းဝယ်ကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြစ်ရန်လိုသည်။
အရေးကြီးသည်မှာညအိပ်ရန်ချေးငွေသည်အတိုးနှုန်းနှင့်တူသည်။ margin အရောင်းအဝယ်ကိစ္စတွင်သင်၏အနေအထားကိုဖွင့်ထားသည့်နေ့တိုင်းအတွက်အခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏သြဇာရှိသည့်ကုန်သွယ်မှုကိုစျေးကွက်တွင်ကြာရှည်စွာထားလေလေ၊ သင်ပိုမိုပေးဆပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏အမြတ်အစွန်းရရှိရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မည်မျှပေးဆပ်ရန်လိုအပ်မည်ကိုသင်အကဲဖြတ်ရန်တကယ်အရေးကြီးသည်။
သတင်းကောင်းမှာသင်၏ပွဲစားအများစုသည်သင်၏ညအိပ်ငွေကြေးကိုဒေါ်လာနှင့်ဆင့်ဖြင့်ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်နေ့ချင်းငွေမည်မျှပေးရမည်ကိုအပြည့်အဝချိုးဖောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ဖွင့်ထားသည့်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်သင်ပရီမီယံကိုပေးရမည်။ ၎င်းသည်သင်ရောင်း ၀ ယ်သည့်ပစ္စည်းနှင့်သင်နှင့်ပြုလုပ်သောပွဲစားများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သင်၏နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်၏ margin balance မှနုတ်ယူလိမ့်မည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးထားပါကသင်၏အနေအထားကိုဖွင့်ထားသည့်နေ့တိုင်းအတွက်သင်၏ငွေပမာဏကိုပိုမိုနီးကပ်စေလိမ့်မည်။
သင်၏နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးအခကြေးငွေအပြင်၊ ပျံ့နှံ့ အကောင့်သို့ကုန်သွယ်ကော်မရှင်။
ကူးစက်ပျံ့နှံ့သည်: ဤသည်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်း၏ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ပြန့်ပွားလေလေ၊ အခကြေးငွေများကိုသွယ်ဝိုက်။ ပေးဆောင်ရလေလေဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်: အချို့ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များကိုကောက်ခံသည်၊ အကယ်၍ သင့်အားတရားစွဲဆိုပါက၎င်းသည်သင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပုံမှန်အားဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာ ၁၀၀ အတွက် ၁% သောကော်မရှင်သည်သင့်အားဒေါ်လာ ၂ ကုန်ကျမည်။
Margin Trading ၏အန္တာရာယ်များကိုလျှော့ချနည်း
ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှု၏နောက်ကွယ်ရှိအန္တရာယ်များကိုသင်ယခုသိပြီ ဖြစ်၍ သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များပင်ပုံမှန်ဆုံးရှုံးမှုများကိုကြုံတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာယင်းသည်အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာ၏သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုပြောခြင်းဖြင့်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရပ်နားရန်အမိန့်များကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ထိုဆုံးရှုံးမှုများကိုမည်သို့လျှော့ချရမည်ကိုသိကြသည်။
Stop-loss order ကို install လုပ်ခြင်းသည်သင်ဆုံးရှုံးသောအကြားခြားနားချက်ဖြစ်လိမ့်မည် သေးငယ်သော သင့်ရဲ့သြဇာကုန်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုအနားသတ်အပေါ်ငွေပမာဏ။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်၊ Stop-loss အမိန့်သည်သင်ကုန်သွယ်မှုပိတ်မည့်အချိန်အတိအကျကိုသင်သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရလျှင်သင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကုန်သွယ်မှုတွင် ၁၀ ဆကိုသြဇာသက်ရောက်သည်ဟုဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဆန့်ကျင်ပါကသင်၏အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ၁၀% ဆုံးရှုံးချင်တယ်ဆိုတာသိသာထင်ရှားပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာ stop-loss order ကို install လုပ်တယ်။
သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကို ၁% အထိလျှော့ချလိုပါကသင်၏ stop-loss trigger price တွင်ဤအရာကိုထင်ဟပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒစ္စနေးစတော့ရှယ်ယာများကိုရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလျှင်သင်၏ရောင်းဈေးမှာဒေါ်လာ ၉၉ နှင့်ရောင်းရန်မှာ ၁၀၁ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ရပ်နား - အရှုံးစျေးနှုန်းလျှင် is အစပျိုးခြင်း, ပွဲစားသည်နေရာအားအလိုလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကုန်သွယ်မှုပြုနေစဉ်၎င်းသည်သင့်အားငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးခြင်းမှတားဆီးလိမ့်မည်။
သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းနှင့်မျှမတူအောင်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ဆက်ဆံနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် သင်သည် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ CFDs သင်ရွေးချယ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် လွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးချလိုပါက (contracts-for-differences)။ CFD များသည် သင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘဲ ပိုင်ဆိုင်မှု၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကို မှန်းဆနိုင်စေပါသည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့် CFD သည်သင်ရွေးချယ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှု၏တကယ့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကိုထင်ဟပ်နိုင်သော်လည်းသင်ဟာ dividends သို့မဟုတ်ကူပွန်ငွေပေးချေမှုကိုခံစားခွင့်မရှိပါ။
သတင်းကောင်းမှာ CFD ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဏ္financialာရေးတူရိယာများကိုလက်ခံထားကြသည်။
ကုန်သွယ်မှုကန့်သတ်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါ၎င်းသည်သင်၏လက်လီရောင်းချသူသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ဖြစ်ခြင်း၊ သင်အရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အမျိုးအစားအမျိုးအစားနှင့်သင်အသုံးပြုနေသောပွဲစားများစသည့်အမျိုးမျိုးသော variable များပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
Professional က client များ
အကယ်၍ သင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ပွဲစားသည်သင့်အားပေးလိုသောဆန္ဒရှိသလောက်သြဇာရှိသင့်သည်။ တကယ်တော့၊ ဒီပွဲစားတချို့မှာဒီဟာ 200x လောက်များတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ သာသွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ နှင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်သင်သည်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရန်သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားမှအတည်ပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့်သင်အတည်ပြုရန်လိုအပ်သောအနိမ့်ဆုံးအသားတင်အမြတ်ကိုတွေ့ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင့်တွင်လုံလောက်သောကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံရှိကြောင်းကိုလည်းသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။ တနည်းကား, ဒီသက်သေပြတဲ့စာရွက်စာတမ်းထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသက်သေမပြနိုင်လျှင်လက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါလိမ့်မည်။ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်နိုင်ဆဲဖြစ်သော်လည်းသင်၏ကန့်သတ်ချက်များသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသောကုန်သည်များအားငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များသည်သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုမူတည်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗြိတိန်နှင့်ဥရောပကုန်သည်များအားလုံးသည်ဥရောပလုံခြုံရေးနှင့်စျေးကွက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ESMA) မှချမှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များကြောင့်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည်သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသောအတန်းအစားအပေါ် မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
30x: အဓိက Forex အတွဲများ။
20x: Forex အတွဲများ၊ ရှေ, နှင့်အဓိက ညွှန်းကိန်း.
10x: ကုန်စည် ရွှေမှလွဲ၍ အဓိကမဟုတ်သော ညွှန်းကိန်းများ။
2x: Cryptocurrencies ။
သင်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ / ဥရောပသားနိုင်ငံသားမဟုတ်လျှင်ပင်အွန်လိုင်းပွဲစားများသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းအတာကိုလိုက်နာသည်။
Margin Trading ယနေ့မည်သို့စတင်မည်နည်း
margin အရောင်းအဝယ်အသံနှင့်ယနေ့စတင်ရန်ဆန္ဒရှိသလား။ သို့ဆိုလျှင်သင်ယခုသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုတစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်ပေးပါမည်။
အဆင့် ၁ - Margin Trading ကိုကမ်းလှမ်းသောပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ကမ်းလှမ်းသည့်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်ကတော့ CFDs ကိုလက်ခံတဲ့ဘယ် platform မဆိုသင့်ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်အောင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုမှာပါ။ ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာအခြား variable တွေကိုအတော်အတန်အကဲဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။
၎င်းတွင်သင်ကုန်သွယ်နိုင်သောပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၊ နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးကြေးများ၊ ကော်မရှင်များ၊ ပြန့်ပွားမှုများ၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားသည်အဆင့်တူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလိုင်စင်ရရှိရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည် FCA, CySECဒါမှမဟုတ် ASIC.
သင့်အနေဖြင့်ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်သင်အချိန်ယူရန်အချိန်မရှိပါကဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံးအဆင့် ၅ ဆင့်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပွဲစားများအားလုံးသည်အလွန်တရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားပြီးသင့်အားကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုချက် ၃၀: ၁ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်များအတွက်ပိုမို) နှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များကိုထောက်ပံ့သည်။
သင်သင့်လျော်သော margin အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုသင်တွေ့ရှိပြီးပါကသင် account ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည့်အတွက်မည်သည့် platform ကိုသင်အသုံးပြုနေစေကာမူလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သည်။
သင်၏သမိုင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအချို့ကိုလည်းသင်ဖြေဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာသြဇာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကုန်သွယ်နေတဲ့အတွက်ပွဲစားကမင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။
သငျသညျစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပွဲစားကိုအသုံးပြု။ လိမ့်မည်သကဲ့သို့, သင်ယခုသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားအထူးသဖြင့်စာရွက်စာတမ်းနှစ်စောင် - အစိုးရမှထုတ်ပြန်ထားသော ID နှင့်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားများကိုမေးလိမ့်မည်။ ယခင်ထုတ်ပေးသူများနှင့် ပတ်သတ်၍ ၎င်းသည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခု - မကြာသေးမီကဘဏ်ကြေငြာချက်တစ်ခု (သို့) ကုန်ပစ္စည်းငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးရမယ်။ သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ပွဲစားအတွက်အချိန်ယူရမယ့်အချိန် ထိုအရာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပလက်ဖောင်းအများစုသည်၎င်းကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အခုသင့်ရဲ့ အကောင့် အတည်ပြုပြီးပါကသင်ငွေအချို့ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ သင်ရရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများသည်ပွဲစားနှင့်ပွဲစားများနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီဤအရာကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
အဆင့် ၅ - မာဂျင်ရောင်းဝယ်မှု
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံး margin ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ သတိပြုပါ၊ သင်သည် CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်သင်ကသြဇာသက်ရောက်ရန်သီးခြားအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သငျသညျရိုးရာပွဲစားကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်ဒါသာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်လိုသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ။
လောင်းကြေး: ဤသည်မှာ ကုန်သွယ်မှုတွင် စွန့်စားလိုသော ပမာဏဖြစ်သည်။ လောင်းကြေး $500 ရတယ်ဆိုပါစို့။
သြဇာ: ဤသည်မှာ သင်လျှောက်ထားလိုသော ပမာဏဖြစ်သည်။ 3x ကို ရွေးတယ်ဆိုပါစို့။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း, သင်က $ 500 လောင်းကြေး 3x - သင်၏စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစား $ 1,500 ယူ။ ထို့ကြောင့်လိုအပ်သော margin သည် ၃၃.၃% ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အား ၃၃.၃% ထက် ပို၍ ဆန့်ကျင်ပါကသင်၏အကုန်လုံးဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုန်သွယ်မှု execute ရန်သင့်အမိန့်ကိုအတည်ပြုပါ။
ရာနှင့်ချီသောအနားသတ်ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးပေးသူများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်စင်မြင့်ပေါ်တွင်မည်သည့်စင်မြင့်သို့တက်ရောက်မည်ကိုသိခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ရေးနေရာ ၅ ခုအကြောင်းကိုယခုဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းစာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီသင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
အချုပ်အားဖြင့်၊ margin trading သည် သင့်အမြတ်များကို ချဲ့ထွင်ရန် ခွင့်ပြုသော အလွန်ခေတ်မီသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သော CFD ပွဲစားကို သင်အသုံးပြုနေသရွေ့၊ သင်သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ဆီရွှေ၊ cryptocurrencies နှင့် အတိုးနှုန်းများပင်။ တစ်ဖက်တွင်၊ margin trading နှင့် leverage သည် သင့်ဆုံးရှုံးမှုကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်ကကျဆင်းခြင်းမတိုင်မီအန္တရာယ်များကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ သင်၌သင်၏ရရန်အတွက်လိုအပ်သောအရည်အချင်းနှင့်ဗဟုသုတရှိသည်ဟုသင်ထင်ပါက သြဇာကုန်သွယ် လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သောထိပ်တန်းအဆင့် ၅ ဆင့်အနက်မှတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
မာဂျင်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏အကောင့်တွင်ရှိသည့်ငွေထက်များသောအားဖြင့်သြဇာကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရရှိသောအကျိုးအမြတ် (သို့) ဆုံးရှုံးမှုများသည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်သြဇာအချိုးအစားဖြင့်တိုးချဲ့လိမ့်မည်။
ဒေါ်လာနှင့်ဆင့်ဆင့်ဖြင့်သင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောငွေပမာဏသည်သင်အသုံးပြုလိုသောသြဇာပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ အလွယ်ကူဆုံးတွက်ချက်ရန်တွက်နည်းကိုတွက်ချက်ရန်မှာနည်းအမျိုးမျိုးကို ၁ ကိုခွဲရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သင်လက်လီရောင်းဝယ်သူဟုတ်မဟုတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်သာရှိပါကပွဲစားအများစုသည်သင့်အား ၃၀: ၁ အထိသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါက၎င်းသည် ၅၀၀: ၁ အထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
မင်းလုပ်နိုင်မှာသေချာတယ် တကယ်တော့သင်ဟာ ၀ ယ်လိုအားသို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမှာစာကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်မလားဆိုတာသင့်အပေါ်မှာလုံးဝမူတည်ပါတယ်။
တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခကဘာလဲ?
သင်သည်သင်၏ဖျက်သိမ်းစျေးနှုန်းချဉ်းကပ်သောအခါတစ် ဦး က margin ခေါ်ဆိုခဖြစ်ပျက်။ ပွဲစားများကသင်၏အနားသတ်သို့ထပ်မံထည့်သွင်းရန်မလိုပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုသင်အမှန်တကယ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံအများစုတွင် margin ကုန်သွယ်မှုသည်တရားဝင်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသောကုန်သည်များသည်သူတို့တတ်နိုင်သည်ထက်ငွေပိုမဆုံးရှုံးနိုင်အောင်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများချမှတ်ထားသည်။